Barcode Standard | Happy Sales - POS Supply
GTINဆိုတာဘာလဲ? နှင့် Barcode Standardအကြောင်း တစေ့တစောင်း
ပထမဦးစွာ Barcode Standardလေးတွေအကြောင်းကို ရှင်းမပြခင်မှာ Barcodeလေးအကြောင်းကို Recap လေးလုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့။ (Barcodeအကြောင်းကို အရင်Postများမှာရှင်းလင်းထားပါတယ်)
လူတိုင်းက စားသုံးသူတွေဖြစ်နိုင်သလို လူတိုင်းကလည်းကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် Barcodeတွေ QR Codeတွေနဲ့တော့ အစိမ်းသက်သက်ကြီး မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာလဲယုံကြည်ပါတယ်။
ယခင်Postတွေမှာ ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Barcodeလေးတွေဆိုတာဟာ Data တွေကို Encodeလုပ်ကာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Black and White Symbolsလေးတစ်ခုပါ။ ဒီSymbolလေးကို Scannerလေးနဲ့ Scanဖတ်မှသာ အထဲမှာ Encodeလုပ်ထားတဲ့ Dataတွေ Informationတွေကို မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း အထူးတလည်ရှင်းပြနေစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။
ကဲ ဒီတော့ အားလုံးပဲ ကျွန်မတို့ နေ့စဥ် သုံးစွဲနေတဲ့ Product တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Barcode နံပါတ်လေးတွေကို မြင်ဘူးကြလိမ့်မယ်။ ဒီBarcode နံပါတ်လေးတွေကိုတော့ Global Trade Item Number(GTIN) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီGTINနံပါတ်လေးကိုတော့ Barcode လို့ခေါ်တဲ့ Data Carrierမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုကြတဲ့အတွက်ကြောင့် Barcode နံပါတ်လို့ပဲ အလွယ်တကူ နူတ်ကျိုးနေကြခြင်းမျိုးပါ။
"GTIN နံပါတ်လေးတွေကို ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေ လုပ်ဆောင်သလဲ?" ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်...
🎐GTINနံပါတ်တွေဟာ Productတစ်ခုစတင်ထုတ်လုပ်လိုက်စဥ်မှစ၍ Productရဲ့ Supply Chainတစ်လျှောက်လုံးကို Trackingလိုက်နိုင်တဲ့ International Standardနဲ့ ညီတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုပါ။
🎐လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ ဒီGTINနံပါတ်လေးတွေနဲ့အတူ Productတွေကို တရားဝင်Assignလုပ်ပြီး တစ်မ္ဘာလုံးကိုဖြန့်ချီမယ်မယ်ဆိုရင် ဒီနံပါတ်လေးကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့
Productရဲ့ Informationတွေကို ဘယ်နိုင်ငံကနေမဆို လွယ်ကူစွာသိရှိစေနိုင်ပါတယ်။
🎐GTINနံပါတ်တွေကို Barcodeတစ်ခုထဲမှာတင်မဟုတ်ပဲ EPC/RFID Tagမှာလည်း encodeလုပ်ကာ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
🎐GTINနံပါတ်လေးတွေကို Format (၄)မျိုးနဲ့တွေ့ရပါတယ်။
GTIN-8၊ GTIN-12နဲ့ GTIN-13တို့ကိုတော့ Retail Itemတွေမှာ အသုံးပြုကြပြီး GTIN-14ကိုတော့ Logistics Unitsတွေဖြစ်ကြတဲ့ စက္ကူပုံး၊ Palletအစရှိတဲ့ နေရာတွေမှာသာအသုံးပြုကြပါတယ်။
GTINနံပါတ်လေးတွေအကြောင်းကို အားလုံးပဲနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ GTINနံပါတ်လေးတွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Barcode Standard လေးတွေအကြောင်းကို ဆက်သွားလိုက်ကြရအောင်။
International Standard နဲ့ညီတဲ့ Barcode လေးတွေကိုတော့ GS1 Barcodeလေးတွေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ ဒီလို International Standardနဲ့ညီတဲ့ Barcodeလေးတွေကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ GS1 Myanmarဆိုတဲ့ Organizationတစ်ခုက သင့်ကို ကူညီပေးဖို့ အသင့်ပါပဲ။
GS1 Barcodeလေးတွေကို အခြေခံအားဖြင့်
ဒီBarcodeလေးတွေကတော့ GS1 Barcode Standardတွေထဲမှာ သတ်တမ်းအရှည်ကြာဆုံးနဲ့ အသုံးအများဆုံး Barcodeလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ EAN/UPC barcodes လေးတွေဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတိုင်းလိုလိုမှာ တွေ့ရတဲ့ Barcode Standard လေးတွေပေါ့။ ဒီEAN/UPC Barcodeလေးတွေကိုတော့ အမျိုးအစားအားဖြင့်တော့ (၄)မျိုးထပ်မံခွဲခြားထားပါသေးတယ်။
DataBar Barcodesတွေကိုတော့ များသောအားဖြင့် Freash Foodတွေမှာ Lableတပ်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီBarcodeလေးတွေဟာတော့ Itemတစ်ခုချင်းစီရဲ့Batch No.တွေ Expiry Dateတွေကို သိမ်းလေ့ရှိကြပြီး itemတစ်ခုရဲ့ အလေချိန်ကိုပါ ထည့်သွင်းပြီးသိမ်းလေ့ရှိပါတယ်။ DataBarတွေကိုတော့ လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှာ ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပါတယ်။DataBar Familyမှာတော့ Symbolအားဖြင့် (၇)ရှိပေမယ့် (၄)ခုလောက်သာ POS Systemမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ Symbol (၄)ခုကတော့
🎈DataBar Stacked Omnidirectional
🎈DataBar Expanded Stacked
🎈DataBar Expanded တို့ဖြစ်ပါတယ်။
🎈GS1-128နဲ့🎈ITF-14တို့ဟာ နယ်ပယ်အစုံမှာ သုံးစွဲနိုင်တဲ့အတွက် အသုံးအများတဲ့ 1D Barcode Standardလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ GS1-128 မှာတော့ ဘယ် GS1 ID Keyကိုမဆို ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး Itemရဲ့ Informationတွေဖြစ်တဲ့ Serial Numberတွေ၊ Expiration Dateတွေနဲ့ အခြားသောDataများကိုလည်း Storeလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ITF-14မှာတော့ GTINကိုသာ Encodedလုပ်နိုင်ပြီး ဂျပ်ဖာတွေမှာ ရိုက်နှိပ်ဖို့ သုံးစွဲကြပါတယ်။
2D Barcodeလေးဟာ လေးထောင့်ပုံဏ္ဍန်ရှိကြပြီး အစက်အပျောက်လေးတွေ Geometric Patternလေးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ 2D Barcodeလေးတွေဟာ သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားရှိနေပေမယ့်လည်း Dataပမာဏတော်တော်များကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ 2D Barcodeလေးတွေကိုတော့ စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။ Manufacturingလုပ်ငန်းများ၊ Warehouse & Logisticsလုပ်ငန်းများနှင့် ဆေးဝါးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများမှာ အများဆုံး အသုံးပြုလေ့ရှိကြတာကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Two-Dimensional Barcodeရဲ့ Standardလေးတွေကတော့
🎈GS1 DataMatrix နဲ့
🎈GS1 QR Codeတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ Barcode Standardလေးအကြောင်းကို အတော်လေးနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
နိုင်ငံတကာကို ကုန်ပစ္စည်းတွေ Exportလုပ်မယ့် လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ဝမ်းသာရမယ့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုယ်ပိုင်Barcodeနံပါတ်လေးကိုလည်း GS1 Myanmarမှတစ်ဆင့် ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုယ်ပိုင်Barcodeနံပါတ်လေးကတော့ "883"ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Barcodeနံပါတ်တွေမှာ "883"ဆိုတဲ့ ဂဏန်းလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ "Made In Mynamarကွ" ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာမှာ ဝင့်ကြွားစွာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ပါပြီ။